Central Bank to Auction Treasury Bonds | Myanmar Business Today
Home Business Local Central Bank to Auction Treasury Bonds
Central Bank to Auction Treasury Bonds
The Central Bank of Myanmar will auction treasury bonds to finance the budget deficit on January 21, February 18 and March 17.
U Maung Maung Win, Deputy Minister of Planning, Finance and Industry, told the Upper House of Parliament in August 2019 that the government would fund the budget deficit through government bonds and treasury bills.
According to the government’s fiscal policy statement, 50 percent of the deficit will be covered by the sales of treasury bills, 21 percent by treasury bond sales and 29 percent by foreign borrowing.
Local banks, foreign bank branches, securities underwriter firms and insurance firms are eligible to bid for the two- three- and five-year treasury bonds.
The two-year bond pays 8.5 percent while the three-year pays9percent and the five-year, 9.5 percent.
Interest payment is made twiceayear, in May and November. Bond prices are K10,000, K 100,000, K 1 million and K10 million.
In international markets, investment companies are interested in treasury bonds, which are very low risk and offer better returns than bank deposits.
အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေကို ဖြည့်ရန် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၊ ဖေဖေော်ဝါရီ ၁၈ ရက် နှင့် မတ်လ ၁၇ တို့တွင် ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုအပ်ငွေစာရင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လိုငွေများအတွက် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များနှင့် ငွေတိုက်လက်မှတ်များကို ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းဖြင့် ဖြည့်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ၂၀၁၉ သြဂုတ်လက ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေကို ငွေတိုက်လက်မှတ်ရောင်းချခြင်းမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချခြင်းမှ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပြည်ပချေးငွေမှ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖြည့်ဆည်းကြောင်း ရသုံးမှန်းခြေဆိုင်ရာငွေစာရင်းစာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ပြည်တွင်းဘဏ်များ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲခြား၊ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီများကို ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ရောင်းချမည့်ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ် ၃ နှစ်နှင့် ၅ နှစ်အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။
အဆိုပါ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ တစ်နှစ်အတိုးနှုန်းမှာ ၂ နှစ်သက်တမ်းရှိငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းမှာ ၈ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊၃ နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းမှာ ၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၅ နှစ်သက်တမ်းရှိသည့် ငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းမှာ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ သတ်မှတ်ထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ သိရသည်။
ထိုြ့ပင် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ အတိုးနှုန်းကို တစ်နှစ်လျှင် မေလတွင် တစ်ကြိမ် နိုဝင်ဘာလတွင် တစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးသည် ်။
အစိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်လိုငွေဖြည့်ရန်အတွက် ကျပ်တစ်သောင်းတန် ၊ ကျပ် တစ်သိန်းတန် ၊ ကျပ်တစ်သန်းတန် နှင့် ကျပ်ဆယ်သန်းတန် ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာတွင် အစိုးရများကထုတ်ရောင်းသည့်ငွေတိုက်စာချုပ်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အထိ အခိုက်မရှိသည့်အတွက် ကုမ္ပဏီများက စိတ်ဝင်တစားဝယ်ယူလေ့ရှိပြီး ဘဏ်တိုးနှုန်းထက်ပိုလေ့ရှိခြင်းကြောင့် ဝယ်ယူစုဆောင်းလေ့ရှိသည်။
Previous articleLocal, Foreign Firms Entitled to Dispute Settlement: Myanmar Competition Commission
Next articleYangon Approves 49 Investments in First Three Months of Fiscal 2020